Steven Gerrard oo qirtay neceybka uu u qabi jiray Laba Kabtan oo Man United soo martay
Sunday, May 27th, 2018 - 12:39:47
Thursday September 07, 2017 - 15:12:42 in Wararka by Kubad Bile
Halyeeyga Liverpool Stevan Gerrard ayaa qirtay inuu naceyb uu u dareemay labadii kabtan ee hore kabtanimada United ugu soo xiray ee Rio Iyo Gary intii uu ku gudda jiray mustaqbalkiisa ciyaareyd.
Gerrard ayaa ka dhaliyay mustaqbalkiisa ciyaareyd kooxda United lix gool. waxaa la xasuustaa halyeygaan inuu waji gabax garoonka uu uga baxay kulankii ugu dambeeyay oo uu wajaho kooxda United kadib markii 3:0 afka ciida loodaray.
Arbacadii ayaa la calaamadeeyay 10,000 maalmood inay kasoo wareegtay maalintii ugu dambeesay ay Liverpool sare u qaado horyaal 1990.
Gerrard ayaa laba jeer loo taagay calaamada casaanka mustaqbalkiisa ciyaareyd . mid kamid ah waxay aheyd kulankiisii ugu dambeeyay ee uu wajaho United. xili dhowr kulan uu fooda daray Neville iyo Ferdinand.
Rio Ferdinand. Gary Neville iyo Stevan Gerrard ayaa dhamaan waxa ay iskaga fadhiisteen kubada cagta. balse Stevan G ayaa daaha ka qaaday labadaan ciyaaryahaan inuu ugu nacbanaa kooxda United.
"Mar aad kula dhaxjirto qeybta laga soo galo garoonka Rio Gary Neville waxaa u baahaneysaa inaad ku sameyso wax waliba oo aad awoodo si aad u garaacdo. waxaa jira nacayb. taasi waa sida dhabta ah. marka aad kula kulanto xulka Ingiriiska waqtigaasi. waxaad iska dhigaysaa sida inaa iyaga jeceshahay.laakiin mustaqbalkaaga wuu dhamaaday. iyaga mustaqbalkodana wuu dhamaaday.waxaa bilaawanaaya saaxiibtinimada dhabta ah" ayuu Gerrard usheegay saxaafadda.
Gerrard hadalkiisa wuxuu kusoo af-meeray. "Waxba maanan helin. Balse waan ixtiraamayaa Rio ciyaaryahaan ahaan. waxa uu usoo ciyaaray kooxda heer sare dhamaan noloshiisa. waa ciyaaryahaan fiican. waxaan ku faraxsanahay doorkiisa BT inaa kala shaqeeyo sida ugu wanaagsan"